Rafael Sabatini, makore gumi nemana makumi matatu nematatu ebhuku rakakura rezvekunakidzwa | Zvazvino Zvinyorwa
Rafael Sabatini, makore gumi nemana makumi matatu nematatu ebhuku rakakura rekunakidzwa
Zadziswa nhasi 143 makore yekuzvarwa rafael sabatini, mumwe wevanyori vakuru ve ruzivo rwekunakidzwa. Uyu munyori wamai veChirungu nababa veItari vakasainira mamwe emazita akanakisa uye anorangarirwa zvakanyanya eiyo genre. Hazviiti kuti ave asina kuverenga kana kuona mune yake firimu magadzirirwo ayo Kaputeni Ropa, to Gungwa gungwa oa Scaramouche. Saka kupemberera zuva rake rekuzvarwa ngatirangarirei dzimwe dzenyaya dzake neshanduro dzadzo pachiratidziri chikuru.
2 Basa rake
3 Mavhidhiyo mana emafirimu
4 Kaputeni Ropa
5 Rovambira yegungwa
6 Iyo nhema nhema
7.1 Mamwe mazita
Ndinotya zvizvarwa zvitsva Zita raRafael Sabatini harinzwike senge rakawanda kana pamwe hapana chinhu kwavari. Asi kune avo vedu vatove zera uye vanga vari swashbuckling vana mukuverenga uye bhaisikopo Sabatini iri zvakafanana neakanakisa maadheni. Isu taigona kunge taiziva basa rake kare nekuda kwe cinema kupfuura mabhuku, muHollywood pakanga pasina magamba akawandisa ane masimba asingabviri uye vapambi vacho vaive chaivo.
Sabatini yaibva nyama neropa, vaibata mapakatwa uye vaitora zvikepe zvepirate. Uye zvakare, ivo vaibva kune dzimwe nguva uye vaine aura yezvakavanzika kana vaitofanira kuchinja kuzivikanwa kwavo. Kana kuti vaipfeka mamask kana masiki uye vaigara vachibuda munjodzi nezvakanaka uye vaikunda vakaipa vaive pabasa.
Sabatini aive zvakare munyori we nyaya pfupi uye nhoroondo, asi kunyanya yeavo enganonyorwa tyemhando yemhando, ine yakawanda yekushambadzira uye zvakanyatso nyorwa zvinyorwa. Pamwe maitiro ake, nemazuvano emakoni, anga ave echinyakare, asi zvemukati hazvisi uye hunhu hwake hwemutauri wenyaya ane hungwaru hunosara.
Sabatini akashaya muna Kukadzi 13, 1950 mu Adelboden, ChiSwiss. Mudzimai wake wechipiri, mushure mekufa kwake, aive nemutongo uyo basa rake rinotanga kunyorwa padombo reguva rake Scaramouche: "Akazvarwa nechipo chekuseka uye nekufunga kuti nyika yakapenga".
Akaburitsa bhuku rake rekutanga, Vanoda Ivonne, muna 1902, asi yakanga isati yasvika kutozosvikira kota yezana ramakore gare gare ikoko kubudirira kubudirira ne Scaramouche muna 1921. Yakagadzwa muFrance Revolution, iri basa raive rinotengesa zvakanyanya panguva yacho. Kubudirira kwaizosimbiswa gore rinotevera ne Kaputeni Ropa.
Pakazara akaburitsa 31 enganonyorwa enganonyorwa, mazhinji acho aive ekugadziriswa kwemafirimu. Asi iyo zvinyorwa zvaisatombovimbika kumabhuku uye Sabatini akaramba idzi shanduro. Kuwedzera kune enganonyorwa enganonyorwa, iye akaburitsa Mabhuku epfupi masere uye matanhatu ehupenyu yezvakaitika kare. Zvakare akanyora theatre, kusanganisira kuchinjirwa kwe Scaramouche.
Mavhidhiyo mana emafirimu
Isu takavaona hongu kana hongu. Nekuti ivo chikamu che Hollywood inobudirira kwazvo yekufungidzira mushanyi wemakumi matatu, makumi mana nemakumi mashanu. Nekuti Errol flynn sezvo chiremba Peter Ropa akashanduka kuita kapirita kaputeni Ropa haakanganwike. Sezvazviriwo mu Rovambira yegungwa. Nekuti yakaratidza hukama hwaFlynn hune zvibereko uye kushanda nemutungamiriri Michael Curtiz kana vatambi Olivia de Havilland, Basil Rathbone kana Claude Mvura.
Nekuti iyo ziso mask, mitsetse leggings uye inoshamisa pfumo duel pakati paStewart Granger naMel Ferrer en Scaramouche kana kunaka kusingaenzanisike kwaJanet Leigh naEleanor Parker. Nekuti yakagadziriswawo mune yedu cinephile ndangariro iyo Tyrone kuenderana kwekuedzwa pamwe nemamwe mazita okutanga Iyo nhema nhema. Uye nekuti, pakupedzisira, hatina kukwanisa kuva nenguva iri nani nenyaya idzodzo.
Paive neyekutanga vhezheni muna 1924, asi inonyanya kurangarirwa ndeye iyo Michael Curtiz, ivo 1935.
Chiremba Peter ropa iye chiremba akazvipira zvakakwana kuvarwere vake vanogara pamucheto wematambudziko ezvematongerwo enyika. Asi riinhi achipomerwa zvisiri izvo zvekupandukira maitiro ake anochinja. Kutumwa semuranda kuWest Indies, asi akapiwa hunyanzvi uye hunyanzvi, anokwanisa kutiza uye inova pirate inotyisa, Captain Ropa.
Zvakare kubva kuna Michael Curtiz uyo akadzoka kunanga mukati 1940 kuna Errol Flynn, makore maviri mushure mekuzviita mukati Robin weMatanda. Kunge yapfuura, ndizvo imwe yakasarudzika yeiyo adventure uye pirate mhando.
Inotaurira zviitiko zve Geoffrey thorpe, corsair yeChirungu, kutya kwezvikepe zveSpain. Pakukwira chimwe chazvo anotora Dona Maria Alvarez weCordoba, mukuru wechiSpanish, waanodanana naye nekukasira. Mambokadzi paakadzokera kuEngland Elizabeth I Iye anomutumira iye kwakakosha basa uko kwaachawira mumaoko eSpanish.
Iyo nhema nhema
Ndakamutora kuenda kumamuvhi Henry mambo en 1942 uye protagonists ayo aive Tyrone Simba uye Maureen O 'Hara pakati pevamwe.
Tinodzokera kuzana ramakumi nemanomwe regumi nenomwe uko pirate Henry Morgan anonzi gavhuna wechitsuwa cheJamaica neChirungu Crown. Morgan anoda kuchenesa Gungwa reCaribbean revapambi uye nekudaro anobvunza vaviri veavo vaaimboshanda navo rubatsiro, Yambiro uye Tommy Bhuruu. Asi mumwe wavo, Captain Leech, haazobatanidze boka uye nerubatsiro rwevapanduki vanoba mwanasikana weaimbove gavhuna, izvo zvinokonzeresa kurwa kweropa.
Mutungamiriri George Sidney akatungamirirwa mukati 1952 iyi vhezheni de script yakachinja chaizvo zvichienzaniswa nenhoroondo yekutanga yaSabatini. Ivo nyeredzi mariri StewartGranger, Eleanor Parker, Mel Ferrer naJanet Leigh.
Isu tiri muFrance ye zana ramakore XVIII uye iyo firimu inotaurira zviitiko zve Andre-Louis Moreau (Stewart Granger), bastard mwanakomana wemurume anokudzwa. Philippe deValomorin, Shamwari yepamwoyo yaAndré, mudiki echimurenga anopondwa Marquis de Mayne, anokudzwa uye anokwanisa kubata pfumo. André anopika kutsiva kufa kweshamwari yake uye kuuraya marquis. Dambudziko nderekuti kurwa pamberi anofanira kudzidza kubata bakatwa.
Zvichakadaro, Andre achasangana Aline de Gavillac (Janet Leigh) waachawira murudo naye, asi ndiye mukwanyina wemarquis. André anozopedzisira ajoina kune boka revaratidziri ndiani achamudzidzisa kuve akanaka pfumo uye kumubatsira kuitisa kutsiva kwake.
Bardelys Anoshamisa. King Vidor akaichinjisa iyo bhaisikopo muna 1926.
Zhizha reSan Martín
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Rafael Sabatini, makore gumi nemana makumi matatu nematatu ebhuku rakakura rekunakidzwa
Recaredo Castillo akadaro
Chokwadi ndechekuti Rafael Sabatini munyori asingazivikanwe, kunyangwe mumwe wevanhu vake achisimbirira kupona, Captain Ropa. Ini ndinotaura izvi nekuti yazvino firimu vhezheni ndeye, zvinoita kwandiri, firimu reRussia kubva muna 1991. Kana mumwe munhu kunze uko achida kurangarira Sabatini, vanomutumidza zita rake rekuti "Scaramouche", asi hazviendi uko.
Kunyange zvakadaro, kana zvasvika pakuravira, kana noveli (kunyangwe iri yakanaka) ndiyo yandinofarira. Uyo wandinonyanya kufarira ndi… Iri dambudziko, kusarudza kuti nderipi randinonyanya kufarira! Kune akati wandei, chokwadi, "Bellarión", "Bakatwa reIslam", "Iyo Venetian mask", "Bardelys the Magnificent", yaizove pamusoro pechinyorwa, kunyangwe ini ndisingagone kurega kupa zita rekuti "Munhu wemashanga", "Pane chikumbaridzo cherufu "," Paola "," Rudo pasi pemaoko "," Hidalguía "..., pasina odhiyo inosarudza zvido, chete kuti ndinovatumidza sekurangarira kwandinovaita. Iko hakuna chikonzero nei "Iyo knight yetavern", "Iyo hawk yegungwa", "Vanoda Ivonne", "Zhizha reSan Martín", "Musande anodzungaira", "Iyo dema swan", "The anodanana muchinda "," Whims of fortune "," Mombe mombe "uye" The Marquis yeCarabás ". Hongu, pane akati wandei asiri pane zvakarongwa, asi imhaka yekuti handina kuvawana, senge randaida kuverenga, «Imbwa dzaMwari» (Pamwe ndichaiwana ndisati ndaenda, kana, kana denga riripo uye rakafanana nezvandinoda, raibhurari, inogona kunge iripo).
Ah maita henyu! Ndokutenda zvikuru! iyi posvo yakandipa inonakidza nguva
Pindura Recaredo Castillo
Mabhuku akanakisa nezve India
Akanakisa mabhuku enhetembo